Dr. Abdurahman A. Noor Sulub oo talooyin muhim ah usoo jeediyay Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Shacabka Soomaaliyed February 10, 2017. Waxaa maanta igu soo booqday xafiiskayga Dr. Sulub. Aniga oo ka faaideysanaya fursadaas ayaan Aqoonyahan Dr. Sulub weeydiyay sadex su’aalod oo kooban. Waxaa wareysigii aan la yeeshay Dr. Sulub uu u dhacay sidaan. Waa maxay Hoggaamintu? Pof....
Farmaajo oo ku guulaystay doorashada Madaxwaynaha Soomaaliya 2017
Maanta oo Abaco ah , Febaraayo 8,2017 waxaa ku guulaystay doorashada Madaxwayanaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxwayne Farmaajo ayaa 184 cod kaga guulaystay Mudanae Xasan Sheikh Maxamud, oo helay 97 cod. Madaxwaynihii hore ayaa tanaasulay in doorashadu u gudubto wareega sadexaad, sidaas ayaa Farmaajo ku noqday Madaxwaynihii Jamhuuriyada Faderaalka ee Soomaaliya. Isla goobtii...